गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » अभिनेत्री जोया राठौर वयस्क फिल्ममा लागेको खुलासा, धेरै रहस्य खुलाउँदा दुनियाँ चकित
काठमाडौं । अभिनेत्री जोया राठौर एडल्ट (वयस्क) फिल्ममा काम गर्छिन् ।
यो कुरा जोयाको छोरालाई थाहा छ । उनलाई आमाको अभिनयबारे कुनै समस्या छैन । धेरै कामुक वेबसिरिजमा काम गरिसकेकी जोया राठौर एकल अभिभावक हुन् ।
महाराष्ट्रको नागपुर शहरकी जोयाले प्रेम विवाह गरेकी थिइन्, जुन लामो समय टिक्न सकेन् । जोयाका श्रीमानले उनलाई कुटपिट गर्थे । जोयाका अनुसार समय बित्दै जाँदा उनीमाथि घरेलु हिंसा र मानसिक उत्पीडन बढ्दै गयो ।
जोयाले श्रीमानबाट अलग हुने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनी नागपुरबाट मुम्बई सरिन् । त्यतिबेला जोयाको छोराको उमेर १ वर्ष थियो । अहिले उनी १८ वर्षका भइसकेका छन् । छोरा पाउनका लागि जोयाले लामो कानूनी लडाइ पनि लड्नुपरेको थियो ।
महाराष्ट्रको नागपुर सहरमा जन्मिएकी जोया राठौरले फिल्ममा अभिनय गर्ने बारे सोचेकी थिइनन् । छोरासँग मुम्बईमा एक्लै बस्न आएकी जोयाले सुरुमा बीपीओ क्षेत्रमा काम गरिन् । त्यसपछि जोया फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरिन् ।
सुरुमा जोयाले धेरै टिभी सिरियलमा सानो भूमिका गरिन् । तर, विगत केही वर्षदेखि जोया कामुक फिल्म उद्योगमा चर्चित नाम हो ।
जोयाले आफ्नो जीवन र वयस्क फिल्ममा आफ्नो कामको बारेमा धेरै कुरा बताएकी छिन् । वयस्क फिल्ममा काम गर्ने आफ्नो निर्णयबारे जोयाले भनिन्, ‘म आफूलाई अभिनेत्रीको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्थें ।
फिल्ममा अभिनय गर्ने मौका पाउन सुरुमा निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो परिवारले पनि मलाई फिल्ममा काम गर्नका लागि साथ नदिने कुरा स्पष्ट पार्यो ।
मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि फिल्मी नभएकाले ममाथि यस्तो भएको हो । मलाई यी सबै कुराको कुनै जानकारी थिएन । सिरियलमा साना–ठूला भूमिका खेल्दै चर्चित अभिनेत्री बन्न चाहन्थें । म सानै उमेरमा अभिनय क्षेत्रमा नर्आका कारण पनि समस्या थियो ।
म पहिले नै एकल आमा हुँ, मैले जागिर छोडेको थिएँ । म जतिसक्दो चाँडो काम गर्न चाहन्थें। यो उद्योगमा या त ग्लैमर बिक्छ, या त करोडको फिल्म वा करोडको स्टार । मैले आफूलाई ग्ल्यामरको लागि उपलब्ध गराएकी छु ।
किनकी यो पनि छाडिदिए के कमाउला र के खाउला भन्ने सोच्थे ।’ वयस्क वा कामुक फिल्महरूमा काम गर्ने कलाकारहरूलाई पोर्न स्टारको ट्याग किन दिइन्छ ?
यो प्रश्नको जवाफमा जोयाले भनिन्, ‘धेरै मानिसहरू र मेरा फ्यानहरू भन्छन् कि तपाईंको काममा व्यक्तिगत आनन्द छ । म उनीहरूलाई भन्छु कि यो त्यस्तो पटक्कै होइन ।
यदि तिनीहरूले मलाई सोध्छन् कि तपाईंले साँच्चै यो गर्नुभयो भने, म तिनीहरूलाई सोध्छु के तपाईंलाई साँचो लाग्छ ? यदि उनीहरूले हो भनेपछि तब म साँच्चै खुशी हुन्छु ।
किनकी क्यामेरा पर्सन, निर्देशक, कलाकार लगायत धेरै मिलेर यस्तो दृश्य बनाइएको हुन्छ, जुन एकदमै वास्तविक लाग्छ ।’
जोया राठौर आफ्नो कामबाट खुसी छिन् । तर आफूले पोर्नस्टारको ट्याग पाउनुलाई उनी ठीक ठान्दिँनन् । यी सबै बाहेक, जोया राठौरले वयस्क फिल्मको दुनियाँका धेरै नसुनेको रहस्यहरू बताइन् ।